Ubundlobongela nayiphi na ibhinqa ithatha indima ebalulekileyo ebomini, kuba kuxhomekeka kwimoya yakhe, imeko yomzimba, ngokomoya nangokomoya. Ngexesha lokwabelana ngesondo, ngamnye umfazi uzama ukwenza inxalenye yothando lwakhe kumlingane. Xa ibhinqa lilala ngesondo, isikhumba sakhe sihlambulukile, izipikili kunye neenwele ziqiniswa. Ngokuyinene, ngenxa yecala elifanelekileyo, umfazi ukhulula uxinzelelo, kwaye ukuba wayenalitha kunye nomlingane, ngoko ke, uyamxolela, naphezu kokuhlambalaza.
Kodwa, ngelishwa, umfazi ekugqibeleni ulahlekelwa ngumdla kumntu wakhe, oku kunokukhokelela ekuphuleni ubudlelwane kunye nokudakumba okukhulu. Nangona kunjalo, ngenxa yemiphumo yakutshanje kwi-pharmacy kunye ne-teknoloji, ukuphazamiseka kwezesondo kuphathwa lula.
Ibhinqa liyindalo emangalisayo yeNkosi uThixo, ngubani okwazi ukufumana imizila yesini abantu abangayiqondi. Umjikelo wempendulo yesondo ihlukaniswe kwiinqanaba ezi-5 eziphambili.
Isigaba sokuqala ngumnqweno ongenanqweno wokulala ngesondo. Njengomthetho, kuvela kwinkqubo yokuqhagamshelana nomzimba (thintela, wange, uvumelane), ukuhogela, ukuthinta, ukuvuselela izandi.
Isigaba sesibini sixhala, sinokumelana nokuphefumula ngokukhawuleza, ukuphefumula kwentliziyo, ukukhululwa kwe-lubricant kwisini, ukunyuka kwi-clitoris, nokuhamba kwegazi ukuya kwisini.
Isigaba sesithathu yintsikelelo yolonwabo. Ngenxa yokuvuselela ngokwesondo, ukunyuka kokuphefumula kuya kwanda, ukukhulelwa kwesisu kuya kwanda, i-labia ikhula kwaye ivuvuke, i-blonde evulekileyo ibonakala ehlathini, kwaye ngeli nqanaba umfazi uvakalelwa kukuba kungekudala uza kuba ne-orgasm.
Isigaba sesine, ngokungathandabuzeki, i-orgasm, kwesi sigaba ibhinqa inamaphutha, ukwanda kwengcinezelo yegazi, ukunyuka kwamalungu omzimba kunye ne-perineum.
Kwaye ekugqibeleni, sifanayo sisondela kwisigaba sokugqibela, esibizwa ngokuthi isisombululo, ngexesha apho ubunzima bomzimba bunqumla khona, umzimba ungena kwiimeko eziqhelekileyo. Esi sigaba sinokuhamba kunye nokulala, ukufumana ulonwabo, kunye nakwezinye iimeko, ukunyuka kwamandla.
Abasetyhini abaninzi bazama ukutshatyalaliswa kwezesondo emtshatweni, kunye neengxaki zesondo njengoko ngenxa yomtshato zizama ukuthintela ukukhuthazwa okuhlukahlukeneyo kuquka imidlalo yokudlala indima, amafutha abalulekileyo, ukuyeka okungavamile, kodwa ngethuba elininzi, ubudlelwane bezobulili beqabane "buya" kwaye "buya". Ukunganakwa kwaye kungekhona umnqweno womnye umntu kunokukhokelela ekudakaleni okukhulu, izifo zesistim sokuzala, ezihamba kunye nokuphazamiseka kunye neempawu zentlungu, oku kufuneke ukungenelela kwonyango loogqirha ngesini. Ngeli thuba lokukhungatheka, ibhinqa lilahlekelwe ngumntu olwabelana ngesondo kunye nolwahlukileyo, ukunyaniseka kwintsebenziswano yeqabane, ukungabikho komnqweno opheleleyo wokulala ngesondo. Njengoko kuyaziwa, nayiphi na inkqubo inemeko yokuqala eyayikhokelela kulo mfazi, kungabangela uxinzelelo lwengqondo, isondo esingenasiphelo, utshintsho lwamaxesha, amava angaphumelelanga kwiintlobano zesini, ukukhulelwa, amanqanaba aphantsi e-estrogen, umphumo weyeza unyango emzimbeni, ngokomzimba nangokomzimba ukukhathala. Kwiimeko ezinjalo, ibhinqa kufuneka lenze imizamo eninzi yokubuyiselwa, inqakraza isondo emtshatweni, kunye neengxaki zesini kufuneka zitshathwe ngokufunda iincwadi ezizodwa, ukutyhilwa kunye nokuthetha nomyeni wakhe okanye kwiifomathi ezihambelanayo kwiindawo ze-intanethi, ukuba akunjalo kuwe unceda, hamba kunye nentombi intombi ye-salon, kwiivenkile zeengubo zangaphantsi.
Izitayela zokubhala kunye nendlela yokuziphatha ngokwesondo
Indlela yokulala ngesini nabantu abapheleleyo?
Ingaba ibalulekile ukuba umntu ukhulu kangakanani?
Kutheni abafazi benqaba amadoda ngokulala?
Yintoni i-tantric massage?
Indlela yokubhala ngokufanelekileyo ukulala ngesondo
Unokufumana njani amandla okwehlisa umzimba uze uzibukele
Ukutya okunempilo xa udlala imidlalo
Isaladi kunye nama-oranges kunye noshizi
Isobho se-Celery sokulahlekelwa kwesisindo
Iimpawu zonyango kunye nemilingo yedayimane
Ikhekhe ngaphandle kwama-biscuits
U-Agniya Ditkovskite akayazi ukuba umtshato uya kumchaphazela njani unyana wakhe
IMvana ebhakakwe irayisi